Isixeko saseMelika sokuqala seSolar, iRabcock Ranch | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Isixeko saseMelika sokuqala seSolar, iBabcock Ranch
UDaniel Palomino | | I-ecology, Photovoltaic Solar Amandla, Ikhaya eliGreen
Ifama yeBadcok, eUnited States, kunye nesiqubulo esithi "Ayizizo zonke izixeko ezilinganayo" isixeko sokuqala ingaba izenza ngathi yintoni inikwe amandla elanga kwi-100% yomthamo wayo.
Ngaba unokuba yi isixeko selanga abaninzi bethu balangazelela?
Ngokwiprojekthi, eyona nto ikhuselekileyo kukuba iyaphumelela, ukongeza I-Badcok Ranch ayixhomekeki nje ekubeni sisixeko selanga kwaye akukho nto yimbi ngaphandle koko iya kuba ngu isixeko esifanelekileyo sokuhamba intaba okanye ukuhamba ngebhayisikileI-Kitson kunye namaQabane, iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ekhuthaza le projekthi kumazantsi mpuma eFlorida.
Izizathu zokuzibeka njengesixeko sokuqala selanga okanye esaziwa njengesixeko esizinzileyo azisileli kwaye kunjalo Amandla eFlorida kunye nokuKhanya, iqabane elinenkxaso kaRhulumente waseFlorida nase County, izokwakha umzi mveliso welanga kwindawo ocinga ngayo nikezela amakhaya angama-19.500 XNUMX kwesi sixeko.
Esi sityalo sisebenza ngombane, ukuya kuthi ga kwi-75 MW yamandla, elingana no-a ufakelo lweepaneli ezingama-340.000 zelanga, Baza kubonelela ngamandla afunekayo imini yonke kwiBabcock Ranch.
Nangona kunjalo, ngexesha kusibekele iintsuku okanye ubusuku, isixeko kuya kufuneka sithenge igesi yendalo. Besele ndiyazi ikhona ikati evalelwe apha!
Ngokwabaxhasi, ukusetyenziswa kwerhasi yendalo ngeentsuku ezinamafu nasebusuku iyakuba ngumlinganiselo wethutyana, kuba banethemba lokuba i-Babcock Ranch iya kuba luhlobo lwedolophu "yelabhoratri" kubomi bokwenyani ukuze bakwazi thanda inkqubela phambili kuphando njengomzekelo kugcino lwamandla elanga.
Elinye inqaku ekufuneka lithathelwe ingqalelo kwesi sixeko selanga esiqinisekisa ukunika "ubomi obuzinzileyo ngokupheleleyo" ngu ukusebenza kakuhle kwamandla zezindlu, ezibonelela ngeepaneli zokugquma thermal, eziqinisekisiweyo kunjalo, yiFlorida Green Building Coalitio.
Ukubeka amandla ahlaziyekayo ayisosisombululo sodwa ukuba awazi kamva ukuba uza kuwasebenzisa njani loo mandla okanye kwimeko embi yiyeke "ibaleke".
Ngoku, ukuba sijonga ngaphandle ukuya ngaphakathi singatsho ukuba oku Isixeko selanga sineendlela ezingaphezu kwe-80 km yendalo, dibanisa a Iigadi zoluntu kwiindawo ezingabamelwane nakwizitalato ezikufuphi, ngaloo ndlela kukhuthazwa unxibelelwano phakathi kwabamelwane, enye yezinto ezingathandabuzekiyo zeBabcock Ranch kwileta yayo eyimfihlo
Oko utshilo, ngaphakathi isixeko siza kugxila kwimodeli yoMsunguli weSikwere eziza kugubungela zonke iimfuno zabemi ukusuka kumbindi wesixeko (edolophini) eziya kuba neeresityu, iivenkile, iivenkile kunye neendawo zokuzonwabisa kunye neWi-Fi yasimahla.
Ukusetyenziswa kwe ngebhayisekile nangona iya kuba nakho ukubaninzi iindawo zokwakha kwakhona ukuthengisa izithuthi zombane.
Ngokuphathelele zothutho loluntu Kuya kufuneka uthathe umcabango omncinci kwimiboniso bhanyabhanya yesayensi kuba iya kuba namandla ombane, ukuza kuthi ga ngoku kulungile, kodwa iya kuzimela ngokupheleleyo kwaye ingaqhubi.
Ayisiyiyo yonke into esixekweni elanga, Umdibaniso weSouth Florida Widlands uchasene nomzi wexesha elizayo ngenxa yezizathu ezinqabisekileyo okoko i Ulwakhiwo luya kuchaphazela iinyoka, iibhere ezimnyama, iikholoni ze-panther kunye ne-woodpeckers abahlala kufutshane.
Abaxhasi bayazikhusela ngokuqinisekisa ukuba ubuncinci I-295 km2 iya kugcinwa kwaye isixeko siza kuhlala ngaphantsi kwe-73 km2 apho iSouth Florida Widlands ibala inoluvo lokuba Iprojekthi iya kuba nefuthe kwindawo engqongileyo enamaziko amatsha okuthenga kunye nezinye izibonelelo, besithi baya kwenza iindawo ezikufutshane zibe sesichengeni ngokufikelela kwikona i-panther, ifunyenwe kwi Ingozi yokuphela.
Ngelixa ukugxekwa kweqela eliphikisayo kunye nabaxhasi "behla imvula" bayazikhusela, isixeko siyaqhubeka ukuqhubela phambili nolwakhiwo lwaso kwaye kungekudala kuyakwenzeka ukuba ube ngummelwane walolu luntu nje ukuba une- $ 300.000- $ 750.000 kwisipaji sakho.
Yilapho ingena khona ingxaki ukuba wonke umkhuseli, i-ecologist, indalo esingqongileyo okanye nawuphina umntu ochaphazelekayo malunga nendalo.
Ukutshabalalisa inxenye ye-ikhosistim kunye nazo zonke iingxaki ezibandakanya ukwakhiwa kwesixeko esizinzileyo ukugcina okusingqongileyo.
Ngaba sibingelela ezimbalwa ngenxa "yokulunga" okanye sime ngxi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Isixeko saseMelika sokuqala seSolar, iBabcock Ranch
Into yegesi yendalo iya kuba lelinye ishishini. Loluphi ulwazi olulungileyo, isithuba esihle.
Enkosi kakhulu Osmar, Kuluyolo ukukwazisa ngazo naziphi na iindaba ezivela kumandla ahlaziyekayo.
Yimpazamo enkulu yoMphathiswa ukujongana netekhnoloji evuselelekayo kwifandesi
USuku lwebhayisikile kwihlabathi